किन प्राइभेट मोमेन्ट्स (Private moments) सार्वजनिक हुन्छन ? यस्तो रहेछ वास्तविकता – Etajakhabar
किन प्राइभेट मोमेन्ट्स (Private moments) सार्वजनिक हुन्छन ? यस्तो रहेछ वास्तविकता
ताजा खबर :- यदि तपाई पनि आँफ्नो साथी सँग घनिष्ठ हुनुहुन्छ भने सावधान रहनु होला । यो साँचो हो, साथी सँग घनिष्ठ हुने मानिसहरू इच्छाको रुपमा प्राइभेट मोमेन्टको तस्वीर खिच्ने र भिडियो बनाउने गर्दछन् । तर के तपाईलाई थाहा छ? तपाईको यो भिडियो बनाउने र तस्वीर खिच्ने बानी पछि गएर मूल समस्या बन्न पुग्छ ।
हालै गरिएको एक रिसर्च अनुसार, यस्तो व्यक्ति जसमा साइकोपेथको सिम्टम्स छ अथवा जो व्यक्तिमा साहनुभूतिको भावना छैन । यस्ता मानिसले बदला लिनको लागि प्राइभेट मोमेन्ट समयमा खिचेको तस्वीर र भिडियोलाई अनलाइन शेयर गर्न सक्छन् ।
रिसर्च गर्नुको उद्देश्य
रिसर्चमा बदला बदला लिने भावनाको समयमा अश्लील सामग्रीलाई अनलाइन गर्ने र एक विशेष साइक्लोजिकल फीचरको बीच सम्बन्ध देख्ने कोशिश गरिएको छ ।
रिसर्चको निष्कर्ष अनुसार पाइयो कि जब प्राइभेट मोमेन्टको भिडियो र तस्वीरलाई कुनै व्यक्ति बदला लिने भावनाले अनलाइन गर्छ भने यो रिभेन्ज पोर्न वर्गमा पर्दछ ।
यो रिसर्च ‘इन्टरनेशनल जर्नल अफ टेक्नोएथिक्स’ मा प्रकाशित गरिएको छ । यसमा भनिएको छ कि व्यक्ति दिमागी समस्याको शिकार हुने गर्छ र उनीहरुलाई रिभेन्ज पोर्नमा समावेश हुने बढी सम्भावना हुन्छ ।
ब्रिटेनमा केन्ट ययूनिभर्सिटीको एफ्रोडिटी पिनाको निर्देशनमा यस रिसर्चलाई नतिजा दिइएको थियो । जसमा धेरै मानिसहरूले बदला लिनको लागि पोर्न तस्वीर हाल्ने सपोर्ट गर्छन । अध्ययनमा १८ देखि ५४ वर्षको उमेर समूहको १०० युवालाई समावेश गरिएको थियो । अध्ययनमा समावेश सहभागी मध्य २९ प्रतिशत मानिसले भने, बदला लिनको लागि अश्लील क्रियाकलाप गर्छौँ । ८७ प्रतिशत मानिसले रिभेन्ज पोर्नमा अलि धेरै झुकाव प्रकट गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र २०, २०७३ समय: १२:५९:००
बालुवाटारका कुरा बाहिरिँदाको बबाल
मापदण्डविपरीत १० हजार सैनिक ब्यारेक
१२ अर्बको सरकारी जग्गा खाने को को ? : अख्तियारलाई समेत मिलाएर भूमाफिया मालामाल